Qarax Khasaare Geystay oo ka Dhacay K. Gaalkacyo
Wararka ka imaanaya magaalada Gaalkacyo ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in qarax ismiidaamin ah uu ka dhacay magaalada Gaalkacyo, gaar ahaan qeybteeda Koofureed ee magaalada ee ay ka taliso dowlad goboleedka Galmudug.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in qaraxa uu ka dhacay afaafka hore ee garoonka Cabdullaahi Ciise, halkaasoo ay ku sugnaayeen dadweyne badan oo soo dhaweyn lahaa Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo booqan lahaa Magaalada.
Wariyaha VOA Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo ku sugnaa garoonka marka qaraxu dhacayay ayaa ku soo waramaya inuu jiro qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Qaraxa ayaa la sheegay inuu fuliyay qof isku soo xiray walxaha qarxa, oo isku qarxiyay goob ay ku sugnaayeen ciidamo iyo qaar ka mid ah ilaaladdii horudhaca aheyd ee Ra’isul wasaaraha, oo xilliga qaraxa dhacayay la sheegay in Garoonkaas laga sugayay.
Ra’iisul Somalia Maxamed Xuseen Rooble ayaa maalmahan booqasho ku joogay Galmudug, waxa uu saakay ka soo ambabaxay magaalada Cadaado oo uu xalay ku hoyday.
Dhageyso Qarax Gaalkacyo